पहिलो खेल पहिलो हार !! युएईंसँगको खेलमा नेपालको रणनीति कस्तो ?? - Experience Best News from Nepal
पहिलो खेल पहिलो हार !! युएईंसँगको खेलमा नेपालको रणनीति कस्तो ??
मलेसियामा आजबाट शुरु भएको एसीसी एसिया कप छनोटको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग पराजित भएको छ ।नेपाल ओमानसँग ७ विकेटले पराजित भएको हो ।
नेपालले दिएको २ सय २२ रनको लक्ष्य ओमानले ४८ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गरेपछि नेपाल ७ विकेटले पराजित हुन पुग्यो । ओमानका लागि खवर अलिले नटआउट ८४ रन बनाए । जिसान माक्ससुड ४५ रनमा अविजित रहे । भैवव वाटेगौनकारले ४१ रन जोड्दा जतिन्दर सिंह ३० तथा अकिव इल्यासले १६ रन बनाए । पारस खड्काले एक विकेट लिए ।
यसअघि क्वालालम्पुरस्थित बायुमास ओभरमा भएको खेलमा नेपालले निर्धा्रित ५० ओभर पुरै खेल्दै ९ विकेट गुमाएर २ सय २१ रनको सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो । नेपालका सम्मानजनक योगफलमा राष्ट्रिय टिममा पूनरागमन गरेका सागर पुनले ८३ रनको योगदान दिए ।औसत शुरुवात गरेको नेपालका लागि सागरले ८४ बलमा ६ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।
ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्लल ४५ रन जोडे । आरिफ शेख ३६ रनमा आउट हुदा तथा करण केसी २६ रनमा अविजित रहँदा अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो खेलन सकेन । ओपनर सुबास खकुरेल ४, कप्तान पारस खड्का ८, दीपेन्द्रसंह ऐरीले मात्र ९ रन जोड्न सके । सोमपाल कामीले ५ रन बनाए । रोहितकुमार पौडेल शुन्य रनमा आउट भए । ओमानका अजय लालचेटा, मोहम्मद नदिम र विलाल खानले समान २ विकेट लिए ।
नेपालले अब भोलि युएईंसँग खेल्नेछ ।
राष्ट्रिय क्रिकेटमा आर्मीको लगातार चौथो जित
अष्ट्रेलियाद्वारा स्कटल्याण्ड ७ विकेटले पराजित
विश्वकप क्रिकेटमा भारतको शतप्रतिशत जित
वेष्टइन्डिज क्वाटरफाइनल नजिक
राष्ट्रिय क्रिकेटमा क्षेत्र नम्वर ८ पोखराको पहिलो जित
महिला क्रिकेटमा नेपालको अग्रता, टि-२० मा फाइनल प्रवेश गर्न सफल
टिम मै परेनन् नेपाली खेलाडी सन्दिप !!
बिपीएलमा सन्दिपको आज दोस्रो खेल !!
कहाँ र कहिले हुदै छ यो बर्ष इन्डियन प्रिमिएर लिग (आईपीएल) ?